बाणगंगा नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक सम्पन्न, के के भए निर्णय ? (पढ्नुहोस) – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर बाणगंगा नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक सम्पन्न, के के भए निर्णय ? (पढ्नुहोस)
बाणगंगा नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक सम्पन्न, के के भए निर्णय ? (पढ्नुहोस)
कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक आज सम्पन्न भएको छ । नगरपालिकाको आफनै भवन बसेको बैठकले बिभिन्न महत्वुर्ण निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले संघीय तथा प्रदेश सरकारको स्रोतबाट कार्यन्वयन हुने योजनाहरुको बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नः २ का वडा अध्यक्ष बिष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।
उता भोली एक कार्यक्रमकाबिच बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने निर्णय भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बासुदेव खनालले बताए । उनले नेपालमा ९ औँ , प्रदेश तेस्रो र कपिलवस्तु जिल्लामा पहिलो नगरपालिकाका रुपमा बाणगंगा नगरपालिकालाई भोली बालमैत्री नगर घोषणा गर्न लागीएको बताए ।
साथै कार्यपालिकाको बैठकले पुराना घर अभिलेखीकरणका लागी पुस मसान्तसम्म म्याद थप गरेको छ भने नगरभित्रबाट रुपन्देहीको गौतम बुद्ध मुटु अस्पतालमा डाइलेसिस गर्न जाने बिरामीलाई राहात प्रदान गर्नका लागी २ लाख रुपैया बजेट समेत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाका मेयर मगंल प्रसाद थारुले बताए ।